बजारमा अनिश्चितता : के डाउनट्रेण्ड सकिएको हो ? - Laltin.com
काठमाडौँ। मंगालबार १३.८३ बिन्दुले बढेको नेप्से ०.५१% वृद्दिको साथ २७१२.०७ पुगेको हो।कारोबार भएका २२३ कम्पनी मध्ये १२२ कम्पनी उकालो लागेका छन र ५४ कम्पनी ओरालो लागेका छन्। ९५ हजार ६ सय ४६ कारोबार संख्यामा करीब ७ अर्ब ३६ करोड रकम र १ करोड ५३ लाख ६ हजार ६१ कित्ता सेयर किनबेच भएको हो।
कारोबार भएका तेह्र उप-समूहमध्ये ४ उप-समुहको सेयर मुल्य उकालो लागेका छन् भने ९ उपसमुहको मूल्य ओरालो लागेका छन्।।बैंकिङ्ग क्षेत्र ०.२०%, बिकास बैंक ०.५६%, होटेल क्षेत्र २.३८%, जलविद्युत क्षेत्र ०.७६%, लगानी क्षेत्र १.३७%, जीवन बीमा क्षेत्र १.३३%, लघुबित्त क्षेत्र ०.२८% र गैर जीवन बीमा ०.६०% ले वृद्दि भएका छन्। यसैगरी फाइनान्स क्षेत्र ०.७५%, उत्पादन क्षेत्र ०.२९% र ट्रेडिङ क्षेत्रमा १.६१%ले गिरावट आएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आजको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ३७ खर्ब ९५ अर्ब बराबर पुगेको छ । कारोबार रकमको आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड लगभग २५ करोड ४४ लाख बराबरको रकम सहित प्रथम स्थानमा पुगेको छ। संख्याको आधारमा भने निफ्रा पाँच लाख एकचालिस हजार तीन सय नब्बे कित्ता सेयर करोबार सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
करीब ७ अर्ब ३६ करोड रकम सेयर कारोबार हुँदा टप टेनमा परेका सबै कम्पनीहरुले एक अर्बभन्दा तल कारोबार गरेका छन्।
NEPSE Daily last updated: 21-09-2021
NEPSE Volume and cumulative A/D line Last Updated 21-09-2021
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -९५३ बाट बढेर -८८५ पुगेको छ। नेप्सेको भोल्युम ११८६६१६ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ औसत भोल्युमको ०.७७% रहेको छ। एड्भान्स्ड डिक्लाइन लाइनको विश्लेषणबाट मार्केट ब्रेथ २.२५ रहेको छ जसले २.२५ सेयर बढ्दा एउटा सेयर मात्र घटेको इंगित गर्दछ। साथै पछिल्लो पाँच दिनको तुलनामा आज पहिलो पटक सकारात्मक मार्केट ब्रेथ देखिएको छ जसले नेप्से सम्भावित बुलिस ट्रेण्ड रिभर्सलको संकेत गरेको छ।तसर्थ, समग्रमा नेप्सेमा अझ अनिश्चितता रहेको संकेत हुन्छ।
प्राबिधिक बिश्लेषकहरुका अनुसार हिजोको बजारको घटाई अनुरुप बजार आज पनि घटेको भए स्वभाविक रुपमा बजारले २५०० को हाराहारीमा सपोर्ट लिने निश्चित थियो तर बजारले यू टर्न लिंदै माथीतिरको यात्रा लिएको छ जुन लगानीकर्ताहरुको निम्ति सुखद संकेत हो। यदि यो हप्ता बजारले माथीतिरको गति कायम राख्न सकेको खण्डमा भने २७०० को बिन्दु बलियो सपोर्ट हुने देखिन्छ।
Previous: सेयर बजारको आगामी यात्रा २५०० तर्फ वा ३५०० तर्फ?
Next: भारी गिरावट पछि बुलिस मारुबोजु : लगानीकर्तामा उत्साह